विवादलाई थाती राख | eAdarsha.com
विवादलाई थाती राख
१. कुनै वेला नेपाली काँग्रेस पार्टी सरकारमा भएको वेला त्यस पार्टीका नेताहरु झगडा गर्दा तथा झगडाकै कारण सत्ता गुमेको र चुनावमा समेत हारेको अवस्थामा कम्युनिष्टका नेताहरु काँग्रेसले सरकार चलाउनै जान्दैन भन्दै आलोचना गर्दथे र आफ्नो पालो आएदेखि राम्ररी सरकार चलाएर देखाईदिने चुनौती दिन्थे ।
२. हुन पनि प्रजातन्त्र पुनर्वाहली भए पश्चात् चुनावमा काँग्रेसले संसदमा राम्रो बहुमत ल्याएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गरेका थिए । त्यसवेला लौह पुरुष भनेर चिनिएका गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री कोइरालासँग विवाद भयो र कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । चुनावमा काँग्रेस नराम्रोसँग हार्‍यो ।
३. त्यसवेलादेखि देशको राजनीतिमा अस्थिरता छायो । विकृति र विसंगति बढ्यो । एकपछि अर्काे पार्टीको सरकार बन्यो । त्यही वेला माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो । सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले निवार्चित प्रधानमन्त्री देउवालाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । स्थिति अरु विग्रदै गयो ।
४. हाम्रै छिमकेी भारतमा प्रजातन्त्र राम्ररी चलेको छ । त्यहाँबाट एक दुई पटकको अपवादलाई छोडेर मिलिजुली सरकार पनि पाँच वर्ष टिकेको छ । तर हाम्रो देशमा बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न सकेन । अहिले त झन् दुई तिहाई बहुमतको कम्यूनिष्ट सरकार छ । अहिलेको जति विवाद कहिले भएको थिएन ।
५. देशमा कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टी भित्रको विवादले सरकारले केही गर्न सकेको छैन । यही मौका छोपेर राजावादीहरुले नारावाजी गर्दै सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरुको हौसला बढ्दो छ र सडकमा नारावाजी गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।
६. गणतन्त्रका लागि प्रतिकूल स्थिति आउन लाग्दा पनि सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुको होस खुलेको छैन । उनीहरु आपसी विवादमा तल्लीन छन् । आरोप र प्रत्यारोप गर्दैछन् । बदलाको भावना बढ्दो छ । पार्टी फुटको संघारमा पुगेको महसुस भएको छ । पार्टी फुटे हुन्छ भन्ने आएको छ ।
७. सत्तारुढ पार्टीमा दर्जनौ मै हुन भन्ने नेताहरु छन् । तर उनीहरु पनि एक–एक समुहमा विभाजित छन् । तटस्थ भएर विवाद मिलाउने तिर लागेका कोही पनि देखिदैनन् । देश गम्भीर मोडमा पुग्न लागेको छ । यस्तो वेलामा विवादलाई थाँति राखेर भए पनि एक हुनु पर्दछ । एकताबद्ध हुनुपर्दछ । यो समयको माग हो ।